आँगन र भाटभटेनीबाट मिठाइ किन्नुभयो ? तपाईं बुबालाई 'दिशा'मा भेटिने जीवाणु खुवाउँदै हुनुहुन्छ !
ARCHIVE, SPECIAL » आँगन र भाटभटेनीबाट मिठाइ किन्नुभयो ? तपाईं बुबालाई 'दिशा'मा भेटिने जीवाणु खुवाउँदै हुनुहुन्छ !
काठमाडौँ - आज बुबाको मुख हेर्ने दिन । बुबालाई मीठो मसिनो खुवाउने दिन । आजको दिन खुब विक्री हुन्छ मिठाइ । तपाईंले पनि किन्नुभयो होला । कतिजना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ होला । यदी तपाईंले आँगन र भाटभटेनीबाट मिठाइ किन्दै हुनुहुन्छ भनेचाहिं एक पटक सोच्नु राम्रो हुन्छ । किनकि नेपाल सरकार वाणिज्य विभागले मानव मलमुत्रमा पाइने 'कोलिफर्म' भेटिएको भन्दै एकपटक कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको आँगनको मिठाइ उक्त प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै पुन: खुलेआम बेच्न थालिएको छ । आँगनकै कर्मचारीहरु अहिलेपनि परिक्षण गरेको खण्डमा उक्त मिठाइहरुमा 'कोलिफर्म' भेटिने दावी गर्छन् ।
यसरी कोलिफर्मयुक्त मिठाइ बेचेको भन्दै आँगनलाइ मुद्धा हाल्ने तयारी समेत गरिएको थियो । तर चर्चित सुपरमार्केट भाटभटेनीले त्यहि मानव दिशामा पाइने जीवाणु भेटिएको आँगनको मिठाइ खुलेआम रुपमा बेचेको पाइएको छ । आइतबार अर्थ सरोकारको टोली भाटभटेनी पुग्दा आँगनको लोगो इंकित भएको मिठाइ बेच्न राखिएको थियो। यस बिषयमा आँगनले समेत स्पष्टीकरण नदिएको र सरकारले पनि प्रक्रिया अगाडी बढाएका बेला भाटभटेनीजस्तो सुपरमार्केटमा आँगनकै मिठाइ बेचिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई आँगन र भाटभटेनी बीचको सेटिङ समेत भन्न भ्याएका छन् । कतिपयले यसलाई संस्कृतिमाथिनै प्रहार भनेका छन् । यसअघि बुबाको मुख हेर्ने दिन र तीजको दिन पनि अर्थ सरोकार डटकमले समाचार प्रकाशन गरेपछि भाटभटेनीको मिठाइको सेल्स घटेको थियो ।